4 imikhuba emihle yokutadisha ongayizama namhlanje
Ingabe ufunda kanzima, kodwa usathola ukuthi ulwazi aluhlali? Uma ufuna ukusebenzisa indlela engcono isikhathi sakho sibengcono, impendulo ayithi, "funda kakhulu futhi ufunde kanzima" (nanoma ukutadisha ngokwanele nokutadisha kanzima kuhlale kuwumqondo omuhle!). Ngesinye isikhathi indlela esibheka ngayo ingenza umehluko. Nansi eminye imibono:
1. Thola ukulala okwanele. Ukufunda kuze kube sebusuku kungase kubonakale kuwumqondo omuhle, kodwa kusho ukuthi uma sesifikile isikhathi sokuthi ubhale lokho kuhlolwa, ukhathele futhi awukwazi ukukhumbula kahle. Beka isikhathi sokulala bese unamathele kuso, ikhona uzokwazi ukuthola ukuphumula okwanele ukuze ukwazi ukwenza kahle.
2. Vimba iziphazamiso. Yenza noma yini oyidingayo ukuze ukwazi ukugxila, ngisho noma kuchaza ukuthi uthola indawo ethule ukuze ukwazi ukusebenza noma ulalele umculo (kodwa qiniseka ukuthi akuwona umculo okuphazamisayo futhi!).
3. Thatha amakhefu amancane, avamile. Ubuchopho bakho kuwazi ukungagxila amaminithini angu-45 kuphela ngesikhathi.
4. Thola isitayela sakho sokutadisha. Ingabe udinga ukutadisha nabanye abantu ukukusiza ugqugquzeke, noma kungcono ukuthi usebenze ngokwakho ngaphandle kweziphazamiso? Hlela isikhathi sakho sokufunda ukuze zivumelane nesitayela sakho sokutadisha.
Kuyasiza ngempela ukuthola imikhuba esebenzela wena. Khumbula, uma into ibe umkhuba, kusho ukuthi akudingeki uzikhumbuze noma uziphoqe ukuyenza lento - uyenza nje ngoba kuyingxenye yempilo yakho. Ukuthola okunye ozokusiza ubuchopho bakho ukuba busebenze kahle, hlola isihloko sethu esithi " Umzimba onempilo, ingqondo enempilo: Esikudlayo kuthinta ubuchopho bethu".